ပထမအကြိမ်မြောက် သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီးမှာ ထီဆုတစ်ဆုဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တဲ့ ပပဝင်းခင် – XB Media Myanmar
ပပဝင်းခင်က “(၁ ) ကြိမ်မြောက်မှာ မင်္ဂလာနဲ့စတင် မြတ်စွာဘုရားက 50000ဆု ချီးမြှင့်တယ်လေ . ပပတို့မိသားစု ကျောမခင်းဆရာတော်ကြီး ပဲခူးကျောင်းမှာ ဘုရားတည်နေတာ ဘုရားမုဒ်တမုဒ် နဲ့ အသောကတံခွန်တိုင် လှူထားပါတယ် . ချစ်ပရိသတ်များ ထပ်တူကုသိုလ်များရကြပါစေ။ အမြဲ အလှူမပြတ် လှူခွင့်ရပါစေ။” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ မျှဝေထားပါတယ်။
ပပဝင်းခင်ကတော့ စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိပြီး ဘုရားတရားတွေ အမြဲမပြတ်လုပ်တာမို့ အခုလို ကံကောင်းနေတာဖြစ်နိုင်တယ်နော်။ ပပဝင်းခင်လဲ ဒီထက်မက ကုသိုလ်ရေးတွေ အများကြီးလုပ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို မိုမိုလေးမှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။